जोगिएला साख ? - मनोरञ्जन - नेपाल
जोगिएला साख ?
साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाहको डेब्यु फिल्म थियो, ड्रिम्स । अपोजिटमा थिए, अनमोल केसी । त्यसैले उनी अनमोलको छायामा पर्ने अड्कल गरियो । तर, त्यस्तो भएन । साम्राज्ञी ‘लेडी स्टार’ का रुपमा उदाइन् । दोस्रो फिल्म ए मेरो हजुर २ पनि हिट भयो । त्यसपछि साम्राज्ञीको व्यस्तता मात्र होइन, पारिश्रमिक पनि ह्वात्तै बढ्यो । दस लाख रुपियाँ लिएर कायरा खेलिन् । यसअघि नेपाली नायिकाले एउटै फिल्मबाट यति विघ्न रकम लिएको खबर बाहिरिएको थिएन । त्यसैले कायरा प्रतीक्षित हुने भइहाल्यो । तर, केही संशय पनि पैदा भएका छन् । किनभने, यसबीचमा उनी अभिनीत तिमीसँग फ्लप भयो । त्यस्तै, कायराको ट्रेलर र गीतले पनि युट्युबमा अपेक्षाकृत भ्युज बटुल्न सकेन । बरु उस्तै भूमिकामा रमाएको भन्दै उनले आलोचना खेप्नु परेको छ । कायराले साम्राज्ञीलाई सुखद अनुभूति गराउला त ? फिल्म १८ साउनमा प्रदर्शन हुँदैछ ।